Hindiya: Kiis Malawon ah: Pragya Thakur iyo laba kale oo eedaysanayaal ah oo ka baxsan maxkamadda | India News - TELES RELAY
ACCUEIL » International Hindiya: Kiis Malawon ah: Pragya Thakur iyo laba kale oo eedaysanayaal ah oo ka baxsan maxkamadda | India News
Hindiya: Kiis Malawon ah: Pragya Thakur iyo laba kale oo eedaysanayaal ah oo ka baxsan maxkamadda | India News
MUMBAI: Maxkamad gaar ah ayaa la siidaayay xadhigga kiisaska qarxa 2008 Malegaon wuxuu ku eedeeyay Pragya Singh Thakur, Lt. Col. Prasad Purohit iyo ee Sudhakar Chaturvedi si ay u muuqatay toddobaadkan ka hor.
Marka kiiska dib loo eego Isniinta Maxkamadda Gaarka ah ee NIA, saddexda qof ee la soo ashkateeyey ayaa dacwad ku soo oogay qareenkooda si ay u helaan ka-dhaafitaan muuqaal ah.
Inkasta oo Thakur iyo Chaturvedi ay sheegayaan inay mashquul ku yihiin diyaar garowga doorashooyinka soo socota ee Lok Sabha, oo ay ka horyimaadeen, Purohit ayaa soo xigtay dhibaatooyin shakhsi ah.
Maxkamaddu waxay ogolaatay codsiyada.
Maxkamadda ayaa sidoo kale oggolaatay codsigii qareenada eedaysanayaasha ah si ay u booqdaan goobta Malegaon Explosion, oo ah magaalo ku taalla 200 kilomitir halkan degmada Nashik ee Maharashtra .
Toddobaadkii hore, Maxkamadda Gaarka ah ee NIA, oo maxkamad la horkeeno todoba eedeeysane, ayaa ku amartay qof walba in uu soo muuqdo ugu yaraan toddobaadkii hal mar.
Kadib wuxuu caddeeyey in laga dhaafo in la bixiyo haddii sababo la qaddariyo la soo bandhigay.
Thakur, musharax ee xarunta Candhi ee Bhopal Lok Sabha, ayaa sheegay in uu codsi in, sida musharax, waa in la raaco nidaamka ka mid ah guddiga doorashada, oo ay ku jirto magacaabidda saraakiisha ay tirinta codadka in uu doorto 23 ah May
Chaturvedi, oo ka qaybqaatay doorashooyinka oo ka madax banaan Xarunta dhexe ee Mirzapur ee Uttar Pradesh, ayaa sababay isla arrintan.
Waqtigaan, maxkamada waxay diiwaangelisaa kaydinta marqaatiga dacwad-qaadista.
Marka laga soo tago saddexdan, eedaysanayaasha soo hadhay waa Major (hawlgab) Ramesh Upadhyay, Ajay Rahirkar, Sudhakar Dwivedi iyo Sameer Kulkarni. Waxay dhammaantood ku jiraan dammaanad.
The 29 September 2008, lix qof ayaa ku dhintay in ka badan 100 dhaawacay kadib markii qalab qarxa ku lifaaqan mooto ku qarxay meel u dhow masjid ku yaal Malegaon.
Eedaysanayaasha waxaa lagu tijaabiyay qodobbo kala duwan oo ka mid ah Ka-hortagga Sharciga Waxkaqabatka Sharci-darrada iyo Xeerka Ciqaabta ee Hindida.
Waxaa lagu soo oogay qoraallada 16 (falalka argagixisanimo) iyo 18 (shirqool lagu sameeyo ficil argagixiso) ee UAPA.
Waxay ku xiran eedeeyay hoos Articles 120 (b) (shirqool dembiyada), 302 (dil), 307 (isku day dil), 324 (geysto ula kac ah) iyo 153 (a) (kor u qaadida Colnimo yihiin inta u dhaxaysa laba kooxood oo diimeed) ee CPI.
Eedaysanaha ayaa sidoo kale lagu soo oogay qaybaha ku habboon ee Xeerka Waxyaabaha Qarxa.
U sheeg macnaha Doorashooyinka 2019 ee Lok Sabha iyo natiijooyinka 23 May oo leh TOI. Raac naga soo raac si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay, casriyeynta nool, falanqaynta wararka iyo falanqaynta xogta sare. Raac nolosha natiijooyinka doorashada isbeddellada ugu weyn iyo cusbooneysiinta ugu dhakhsaha badan maalintii maalinta tirada ee shabakadda macluumaadka ugu weyn ee India.
Rwanda waxay ku guuleeysataa xarun cusub oo kombiyuutar oo isbeddel leh iyadoo taageero ka heleysa GIZ
Faransiiska Télécom trial: 22 000 "dabiiciga ah dabiiciga ah" ayaa ku dhawaaqay Didier Lombard in wadnaha dhagaystayaasha